၁၉ နှစ် - NoFap နဲ့ငါ့စမ်းသပ်ချက်။ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းခဲ့တယ်၊ အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်အရွယ်အလယ်တန်းကျောင်းမှာစတက်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ငါစပြီးဘာကြောင့်ဒီလောက်ညစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိသည်။ ဒါက "beta ကို" ။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေကငါ့ကိုမလေးမစားလုပ်ပြီးငါ့ကိုရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။ မိန်းကလေးတွေကအမြဲတမ်းငါ့ကိုဂရုမစိုက်၊ ငြင်းပယ်ကြတယ်။ ငါဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လူတိုင်းကငါလိုနေ့တိုင်းလုပ်ကြတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုပြaနာတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး။
(တစ်နေ့လျှင် ၁-၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းမှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခုန်ကျော်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်တစ်ပတ်လျှင် ၇-၈ faps ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည်ဟုငါဆိုသည်။ ) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်တန်းကျောင်းတုန်းက၊ အထက်တန်းအထိငယ်တန်းအထိအထိဒီအကျင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းလိုအပ်ချက်သည်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ပိုမိုတူသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ (ယာယီ) ငါ့လမ်းကြောင်းလှည့်ဘယ်မှာဒီဖြစ်ပါသည်။ အငယ်တန်းနှစ်ကငါ wimp ဖြစ်ဖို့၊ မိန်းကလေးတွေမလာဖို့၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မြည်းရလာတာကိုစောင့်နေပြီးပျင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ nofap ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်တော့ porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်အမင်းစွဲလမ်းနေသော်လည်းပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသား။ ငါ ၂၈ ရက်ပတ်လုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ရေတွက်သော်လည်းမရေတွက်။ ငါရုပ်သိမ်းနှင့်ပုံသဏ္gettingာန်လာပြီစတင်ခဲ့သည်။ ငါကအမဲသားဖို့ကြိုးစားဖို့အမြဲရုပ်သိမ်းခဲ့ပေမယ့်ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Streak အတွင်းမှာမှော်အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ nofap ဆိုတာတောင်မှငါတောင်မသိခဲ့ဘူး။ ငါအလေးအနက်ထားအရှိန်မြှင့်စတင်ခဲ့သည်, ငါ့ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်းဒီ Streak အတွက် 28 ပေါင်ဝန်းကျင်တက်ပစ်ခတ် ငါသည်လည်းအခြားဓာတ်လှေကားအတွက်လေးနက်ခွန်အားရရှိခဲ့သည်။ ၃ ပတ်လောက်မှာကျွန်တော့်အလေးချိန်က ၁၃၀ ကနေ ၁၄၅ အထိသွားတယ်။
အဲဒီမှာအဲဒီမှာရပ်တန့်မထားဘူး, ငါ ABSURD ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပမာဏကိုကျွန်ုပ်၏ကျောင်းရှိအမျိုးသမီးများ၊ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောဆွဲဆောင်မှုများပင်သတိပြုမိလာသည်။ ငါနေတဲ့ပူပြင်းတဲ့ကြက်တစ်ကောင်ကငါ့ကို ၉.၁ ပူပြင်းတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပြောပြီးအဲဒီညမှာပါတီပွဲတစ်ခုမှာသူမနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးများကကိုယ့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျွန်တော့်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးအားလုံးနှင့်အတူပါရမီဖြည့်တင်းလိုက်သည်။ ငါခန်းမတွေထဲလမ်းလျှောက်နေစဉ်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ၂ ပတ်ခွဲလောက်ကြာတယ်။ ဒီမျှမျှတတချစ်စရာကြက်ကသူမလုပ်နေတာတွေကိုရပ်လိုက်ပြီးရှေ့မီးထဲမှာရှိတဲ့သမင်လိုပဲသူမမျက်လုံးတွေကလင်းနေတယ်။ အနည်းဆုံး ၈-၉ ကောင်မလေးတွေကဓာတ်လှေကားကိုကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ သင်အောက်ဆုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ အခုတော့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာဂရုစိုက်မှုအားလုံးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြီးဘေးဖယ်ခံလိုက်ရတယ်။ လျစ်လျူရှုခံလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုံးဝပြောင်းရွှေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ဒီ Streak အတွင်းမှာငါရက်ရက်စက်စက်ခံစားခဲ့ရပြီးရူးသွပ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့နောက်မှော်နည်းနည်းလေးကိုနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ သူမရည်းစားရှိနေတုန်းကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကအတို (အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အမျိုးသမီးမိန်းကလေး) ကငါနဲ့အတူပရောပရည်အနည်းငယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမလုပ်နိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူမသည်လက်ခံခဲ့သည်, သူမတစ် ဦး ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီကြက်နှင့်အတူ 3-4 ကြိမ်ပတ်ပတ်လည်ဆွဲထားတက်အဆုံးသတ်ငါတကယ်တော့ဒီကောင်လေးကနေသူမကိုခိုးယူ (ထိုကဲ့သို့သောမျိုးများအတွက်ယခုဒစ်များကဲ့သို့ခံစားရပေမယ့်သမျှ) ။ ဦး ခေါင်းအချို့အပါအ ၀ င်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်နွယ်မှုတွေဆက်ရှိနေတယ်။ ငါစာသားကိုကျောင်းပတ် ၀ န်းကျင်သားရဲအဖြစ်လူသိများလာတယ်၊ အမျိုးသားတွေကငါ့ကိုလေးစားတယ်၊ မိန်းမတွေကငါ့ကိုလိုချင်တယ်၊ ငါဟာမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဥပမာပါ။ ငါတော်တော်လေးလိပ်ပြာလေးကြီးထွက်လာပြီးအရမ်းကိုဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ swagger ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ငါဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်လာတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အခြေအနေတွေကထူးဆန်းလာတယ်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ပူလာပြီး wimp လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါခိုးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကငါ့ကိုအေးဆေးစွာဆက်ဆံတယ်၊ မငိုက်မာတော့ဘူး၊ သူမလည်းသူမနဲ့အရင်စကားတွေပြန်စခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ အဲဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်သတ္တဝါဖြစ်ရတာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ယခုမူကားငါစဉ်းစားသောအခါ, ငါနောက်တဖန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတင်ခဲ့တခါသူမကငါ့အဘို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံးစတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အားနည်းချက်ပြန်လာလာစတင်ခဲ့သည်။ ထို ၂၈ ရက်သို့မဟုတ်ထိုနောက်မှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုထဲသို့ပြန်ကျသွားပြီး၊ ကျွန်မရဲ့အကြီးတန်းနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျွန်မရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့လေးစားမှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကျွန်မရဲ့အစွမ်းခွန်အားဟာရပ်တန့်သွားပြီးတိုးတက်မှုလည်းမရှိတော့ပါ။ ငါမိန်းကလေးများရရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ စုံတွဲတစ်တွဲကအရမ်းပူပြင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေကိုထားလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မိတယ်။
ဒါကကျွန်တော့်ကိုနောက်အခန်းတစ်ခန်းဆီခေါ်ဆောင်လာတယ်၊ ငါဟာတက္ကသိုလ်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကောလိပ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ ငါပျင်းရိပျော့ပြောင်းပြီးကောလိပ်ကျောင်းမှာဘုရင်ဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ငါစွန့်ပစ်ခံရနီးပါးတကယ်သေပြီနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိဘူး, ငါကောလိပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးစာသင်ဘို့အရုပ်ဆိုးများနှင့်မလိုလားအပ်သောခံစားရတယ်။ ငါဝက်ဘ်ကင်မရာကြက်သားမှထွက်လူရှုပ်စတင်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ရှိသည်နှင့် F'ed up shit တစည်းလုပ်ပါ။ အဲဒါဟာတကယ့်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ငါ nofap အပေါ်ထိမိ။ လဲခြင်းနှင့်အချို့သောပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုစတင်; ငါအပိုင်းပိုင်းအတူတကွချပြီးအရေးယူစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်တွင်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းနေပြီးရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယစာသင်ပတ်ပတ်လည်ရောက်လာပြီး PMO ကို ၂၃ ရက်လုံးလုံးရပ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာဒုတိယအပျိုဖော်ဝင်တာနဲ့တူတယ်။
Voice- -Deeper အလေးအနက်ထားငါ့စကားသံကြောင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမဟုတ်ခဲ့, ဤမျှလောက်ဆင်း သွား. , ငါကလူကိုတောင်ငါ့စကားသံကကြီး, ဒါကြောင့်အနိမ့်ခဲ့ငါ့ကိုပြောပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။
-Muscle / Fitness- ငါတစ်ပတ် ၄-၅ ရက်ထိရုပ်သိမ်းခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အမြတ်များသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ကောလိပ်၏ပထမစာသင်ချိန်၌ကျွန်ုပ်သည် ၁၅၀ ၀ န်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆၀ အထိရှိပြီး၊
-Mental Clarity- ငါမရှိတော့ဦးနှောက်မြူငါအများကြီးသာယာတဲ့ခံစားခဲ့ရနှင့်ငြိမ်ဝပ်နှင့်တော်တော်လေးမကြာခဏလူတွေကိုမှာလိမ္မာမှတ်ချက်များပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
-Facial ဆံပင် / ဌာနမှူး Hair- အကြှနျုပျ၏မုတ်ဆိတ်အများကြီးမှောင်နှင့်ထူပေါက်များနှင့်ဖြစ်ပျက်အခြားတုန်လှုပ်ဖွယ်အရာငါ့ဆံပင်၏ thickened ကြီး, ငါ့ဆံပင်ကျွတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်အားနည်းခဲ့ပြီးအလွန်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့, ဒါပေမယ့်ယခုက၎င်း၏အထူနှင့်မှောင်မိုက်ကြည့်ရှုလျက်, အမြိုးသမီးမြားကဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်!
-Skin / Eyes- ငါ့အရေသည်ငါ့မျက်စိပိုပြီးထွန်းလင်းစတင်လျော့နည်းဖျော့နှင့်ပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်လာခဲ့သည်။
-Confidence / မျက်လုံး Contact- ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုကကျန်းမာလာတယ်။ လူတိုင်းကို“ alpha” အဖြစ်မခံချင်တော့ဘူး။ ငါဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောဆိုရဲဘူး။ ကျွန်မမျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်။ အမျိုးသားများကသူတို့နှင့်အတူမျက်စိပိတ်ထားသောအခါများသောအားဖြင့်ဝေးဝေးရှောင်ကြလိမ့်မည်။ မိန်းမများသည်၎င်းကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံကြလိမ့်မည် (ရှက်စရာကောင်းသည်မှာအချို့အမျိုးသမီးများရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်မျက်လုံးများကသိပ်စိတ်မထိန်းနိုင်ဟုထင်ရသည်) ။
-Social တော့ပူပန် / Depression- PMO ကိုစွဲလမ်းနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်မှာကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်အေးခဲသွားပြီးကြောက်စိတ်နီးပါးဖြစ်သွားပြီ။ ယခုပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရံဖန်ရံခါစိုးရိမ်စိတ်ကိုရရှိသော်လည်း၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ငါတကယ်စိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေရှိခဲ့ပြီ။ အခုဆိုရင်ငါကပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တယ်၊ ဘဝမှာရောသေးငယ်သောအရာများကိုပါပျော်မွေ့ပါတယ်။
-Women attention- ငါအမျိုးသမီးတွေဆီကအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာတာသတိပြုမိခဲ့တယ်၊ သူတို့ကငါ့ရှေ့မှာရှိနေပြီးပိုပြီးအာရုံစိုက်လာတယ်၊ သူတို့ကလျစ်လျူရှုခံလိုက်ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကငါဘယ်သူလဲ၊ သူတို့ကငါ့ကိုပြောတယ်။ အမျိုးသမီးအားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်အချို့ကငါနဲ့ပရောပရည်လုပ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားတွေရလာကြတယ်။ အဲဒါတွေကရလဒ်များအရအိပ်ယာထမဟုတ်၊ သူတို့လုပ်တဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အရာတွေကိုယုံပါ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ သူတို့အသံတွေအားလုံးမြင့်တက်လာပြီးဆံပင်တွေနဲ့ကစားတယ်၊ အမျိုးသမီးများနှင့် nofap ၌ကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည့်အရာမှာ၎င်းတို့သည်သင့်ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားမှုလက္ခဏာများပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်လုပ်ဆောင်ရန်မှာသင်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ "ပြန်ဆုတ်" နှင့်တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်နှစ် ဦး အဘို့အမူးရူးသို့သွား။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာကိုမြင်တော်မူ၏။ ယခုတွင်ငါသည် ၁၄ ရက်ပတ်လုံးသွားနေပြီးအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဖြည်းဖြည်းပြန်လာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်တစ်ရက် (၁၇) ရက် (သို့) ၁၈ ရက်ခန့်တွင်အလွန်ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် jus tbe စိတ်ရှည်စွာရုန်းကန်နေပါက nofap အားလုံးသည်အဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည်းခံ။ ဆက်ကပ်အပ်နှံ။ အမှန်တကယ်အရေးယူလျှင်သင်အများစုအတွက်အရာရာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါ့ကိုအသိပေးပါ၊ ဒီပုံပြင်ကမင်းကိုတကယ်ကတိပေးထားတာ။ ငါရုန်းကန်နေရတဲ့အလားအလာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်တယ်။ တစ်ခါတုန်းကအဲဒီကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒီအဆင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်မယ်၊
LINK - အကြှနျုပျ၏ခရီး: အောင်မြင်မှုပုံပြင်, သက်သေပြချက်သို့မဟုတ် Luck? အဘယ်အရာကိုသင်တို့၏အကြံအစည်? (Semi ရှည်လျားပေမယ့်အမှန်တကယ်ကတန်ဖိုးရှိနှင့် 100%)
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက်လေးနက်သောအရာဖြစ်ပြီး nofap တွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ nofap သို့မဟုတ် PMO ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတောင်မှမသိ,3ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခန့်ကြာမြင့်သည်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံး Streak မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ၂၃ ရက်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉ နှစ်နှင့်ကောလိပ်မှပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခရီးသည်သာမာန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ရန်အတွက်ခရီးဖြစ်သည်။ ကြက်ကလေးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အပိုဆုကြေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အခုထိအခြေအနေတွေကတိုးတက်နေပြီ၊ ငါဟာအမြင့်ဆုံးနဲ့အနိမ့်အမြင့်တွေရှိခဲ့တယ်၊ အပြောင်းအလဲတွေဟာသိမ်မွေ့ပြီးနှေးကွေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာအခုအချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတောင်မှကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
* စိတ်ကျန်းမာရေး * - တည်ရှိမှုမရှိသောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်မသက်မသာခံစားမိသည်။ အုပ်စုများနှင့်သူစိမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ငါနေဆဲဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေးများပတ်ပတ်လည်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပေမယ့်ဒါဟာကျိန်းသေအားနည်းနေပေမယ့်။ * - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ သာယာအေးချမ်းမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်မြန်ဆန်စွာ၊ မယိမ်းယိုင်နေသောသို့မဟုတ်မဆင်ခြင်နိုင်လောက်သောအတွေးမရှိသော၊ အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများ - စိတ်ဓာတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်ခံစားနေသမျှအရာအားလုံးကိုခံစားပြီးစီးနင်းခြင်းနှင့်အပျက်သဘောအတွေးများပေါ်မလာခြင်း အများကြီးအဖြစ်။ အများကြီးပိုအပြုသဘောအတွေးများနှင့်မျှော်လင့်ချက်။ * -My focus သည်ပိုမိုပြတ်သားသည်။ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုသည်မြန်ဆန်ပုံရသည်။ ငါထင်တာက ဦး နှောက်မြူမှုပျောက်ကွယ်သွားတာ၊ ငါ့ကိုပိုပြီးထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုပေးတယ်။ ငါပြောရမယ်ဆိုပေမယ့်တစ်ခါတလေမှာငါ့ ဦး နှောက်ကလိင်နဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းနဲ့အလုပ်ထက်ပိုပြီး ဦး စားပေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေထိုင်တဲ့လူလိုငါခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏အခိုင်အမာနှင့် drive ကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်ပါပြီ။ ငါသူရဲနှင့်ရင့်ကျက်သောအတွေးများကိုထင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်လူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကြီးထွားနေသကဲ့သို့ခံစားမိသည်။
* လူမှုရေး * - ငါနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်စရာမရှိဟုပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏စကားပြောဆိုမှုများသည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ပြောဆိုစရာကောင်းသောအရာများရှိသည်။ * -Heeling နဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုပိုရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောယုံကြည်မှုကကျွန်ုပ်ကိုလူမှုရေးအရပိုမို ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းခံရသည်။ * - လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏တွန်းအားမှာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူသားကောင်းများ၏တည်ရှိမှုနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါ - ငါဒီနေ့တနင်္ဂနွေမှာပါတီပွဲတက်တုန်းကငါဟာလူတွေများများစားစားရှိပြီးမိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲတောင်မှငါ့ဆီလာလာပြီးငါနဲ့စကားစပြောတာကပိုပြီးလူမှုရေးဆိုင်ရာ“ သံလိုက်” ပိုများတယ်ဆိုတာကိုငါသတိပြုမိသည်။ နှင့်အချင်းချင်းသိကျွမ်းရတယ်။ ဒီဟာကကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ငါဟာပိုပြီးချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ နွေးထွေးသောအသံကိုစွန့်လွှတ်သလိုခံစားရတယ်၊ လူတွေဟာငါ့ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုစူးစိုက်ရန်မလိုပါ၊ ပို၍ သဘာဝကျသည်၊ ၎င်းသည်မျက်လုံးထဲမှမကြည့်မိရန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ * - ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်းသူတို့တိုးတက်လာသော်လည်းကျွန်ုပ်အလုပ်အချို့လိုအပ်နေသေးသည်။ ငါဟာခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပိုကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပရောပရည်လုပ်ဖို့၊ လိင်တင်းမာမှုကိုမဖန်တီးနိုင်သေးဘူး။
* ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ * -Voice အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတယ်, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေထွန်းလင်းနှင့်ပိုပြီးသိသာ, ငါသည်ယခုယုံကြည်မှုနှင့်တူသောလူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ * -My အသားအရေရှင်းလင်းသည်နှင့်ငါ့အရေသေံတိုးတက်ပြီ, ငါ့မျက်နှာကို alot ကျန်းမာသန်လှပါတယ်။ * -My မျက်စိသည်သူတို့ကိုမယ့်အလင်းရောင်ရှိသည်, glaze မရှိတော့, အဖြစ်ကောင်းစွာကျန်းမာသန်စွမ်းကြည့်ရှုပါ။ * -My ကြွက်သားခဝါသည်ခံစားရတယ်, ငါ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတစ်ဦးသိပ်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာတိုးတက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ * -My မုတ်ဆိတ်ထူပြီးပိုသိပ်သည်းလာ, က alot ပိုပြီးသူရဲတစ်ငရဲလှပါတယ်။ ငါ့ဆံပင်ပေါ်ဦးခေါင်း, ယခုစတိုင်မှတစ်ဦးကအများကြီးပိုလွယ်ပိုထူခြင်းနှင့်ချမ်းသာသည်။ * -My ကိုယ်ဟန်အနေအထားပိုမိုကောင်းမွန်သည်, ငါပို, ယခု grounded ခွကေိုကိုစိုက်နှင့်မြဲမြံစွာရပ်တယ်။ အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာဘာသာစကားသငျသညျကိုယျခန်ဓာလွှတ်ပေးရန်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းဤရုံသဘာဝတူသောငါခံစားရတယ်အလွန်ပုလ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ * ငါသည်ငါ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တူခံစားရနှင့်ကျန်းမာရေးအစွမ်းရှိ၏ -Overall ။ ငါကညာဘက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်တူသောအရာအားလုံးခံစားရ, ငါ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်တူခံစား, ငါ့ဦးနှောက်, ငါ့ဟော်မုန်း။
* မိန်းကလေးများ / ဆွဲဆောင်မှု * -၄ ရက်အကြာမှာငါသတိထားမိဖို့တောင်ဂရုမစိုက်ဘူး၊ ကြက်လေးတွေကငါ့ကိုကြည့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ငါကလျောက်ပတ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါ့မှာကြွက်သားတွေတည်ဆောက်ပြီး ၆ လုံးနီးပါးရှိတယ်။ 6'5 11 နှင့်သွယ် / ပိန်။ ဒါကြောင့်ငါဟာအချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဤတိုးတက်မှုအားလုံးသည်အမှန်ပင်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော် nofap ကသင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဟုထင်သည်။ သင်ကကြည့်ရတာအရာအားလုံးမဟုတ်ပါ၊ မိန်းကလေးများသည်လှပသောကောင်လေး၊ ကြွက်သားများနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုစရိုက်များမှာဘာမျှမဟုတ်ပါ။ သငျသညျပြည့်စုံ wuss နှင့်မယုံကြည်မှုရှိသည်။ * -Gh ယခုမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏“ ဂိမ်း” မှာမူစုပ်ယူနေဆဲပင်။ အခုငါ့ရဲ့ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ nofap ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ * -Chicks သည်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ လက်အောက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်သည် manlier ဖြစ်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအားငါခံစားမိသည်။ **
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတိုင်းကျွန်တော်တူညီတဲ့ရလဒ်တွေကိုထုတ်ပေးတယ်၊ ငါထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေဆုံးရှုံးတာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနားလည်တယ်။ ဘယ်လိုဒီဖြစ်နိုင်သည်အားလုံးငါ့ ဦး ခေါင်း၌ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဘာတွေတွေးနေလဲ၊ ဘာမေးခွန်းတွေရှိရင်ငါ့ကိုဖြေပေးပြီးထင်မြင်ချက်ကိုဝေမျှချင်တယ်။ ငါတိုးတက်မှုခြေရာခံရန်ဆယ်ရက်သို့မဟုတ်ဒီတော့တိုင်းတင်ရန်လိမ့်မည်။
LINK - လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ (နေ့ 20)